Maaskaro, Lederhosen, iyo biir ok ok cusub Air Canada Toronto ilaa Duulimaadyada Munich
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Maaskaro, Lederhosen, iyo biir ok ok cusub Air Canada Toronto ilaa Duulimaadyada Munich
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kanada • Jarmalka Jebinta Wararka • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Bavarians-ka ayaa loo oggolaan doonaa inay raacaan diyaaradda soo socota ee Air Canada 77-9 Dreamliner dhammaan saddexda fasal ee xiran Lederhosen ama Dirndl.
Lederhosen waxay ahaayeen oo dhaqan ahaan laga sameeyay alaab maqaar ah, taasoo u sahlaysa nadiifinta iyo ka saarista wasakhda iyo boodhka, ka dib shaqo maalmeed adag. Lederhosen, sidaa darteed, guud ahaan waxay ahaayeen dhar heer-shaqo ah oo xanbaarsan macneyaal dhaqameed iyo bulsheed dhaqammada iyo waddammada Jarmalka ku hadla. Waxay ku cusub yihiin Bavaria, waxay kor u qaadayaan sunnooyinka Jarmalka intiisa kale, laakiin waa in loo tixgeliyaa inay ku gaar tahay Ontario ama Kanada inteeda kale.
Ka dib markii ay Dowladda Canada ku dhawaaqday inay dib u furi doonto xuduudaha caalamiga ah 7 -dii September, Air Canada ayaa soo bandhigtay faahfaahin dheeraad ah
ee jadwalka duulimaadka Munich (MUC) - Toronto (YYZ).
Fududeynta xannibaadaha ayaa u saamaxaysa muwaadiniinta ajnabiga ah ee si buuxda loogu tallaalay Dowladda Kanada (Moderna, Pfizer, AstraZeneca, iyo J&J) ugu yaraan 14 maalmood kahor oo buuxiya shuruudaha gelitaanka gaarka ah si ay u galaan Kanada socdaalka aan muhiimka ahayn.
Jarmalka ayaa sidoo kale u oggolaanaya dadka reer Kanada ee si buuxda u tallaalay ama kuwa awooda inay muujiyaan tijaabo COVID oo taban oo sax ah inay galaan Jarmalka iyo aagga Schengen.
Xirashada Lederhosen ee marwooyinka iyo Dirndl ee marwooyinka marka duulimaad aan joogsi lahayn laga raaco Magaalada Bavarian Capital City ee Munich oo la aado Toronto ayaa suuragal noqon doonta iyadoo aan kor loo qaadin sunnayaasha Jarmalka ee ku sugan magaalooyinka kale ee ka baxsan Bavaria sida Frankfurt.
Dad badan oo ku nool Ontaariyo, Kanada, waxay jecel yihiin Octoberfest waxayna sawiraan Jarmalku iyagoo xiran koofiyadaha, lederhosen, iyo koofiyadaha Jarmalka, oo loo arko inay yihiin dhar dhaqameedka Jarmalka Bavarian Octoberfest.
Lufthansa waxay hore ugu xireysay Jarmalka iyo Kanada duulimaadyo aan joogsi lahayn, iyo ku darista lammaanaha Star Alliance Air Canada si ay dib ugu bilowdo marinkeedii Munich ee aan joogsiga lahayn ee Toronto waxay ku dari doontaa suuqan firaaqada iyo ganacsiga ee muhiimka ah.
Munich, Frankfurt, iyo garoomada kale ee Yurub sida Vienna, Zurich, Amsterdam, Brussels, iyo Paris waxay ku xirmaan Canada oo leh duulimaadyo toos ah iyo kuwo isku xiran.
Diyaaradaha iyo garoomada diyaaradaha iyo xulafooyinka kala duwan ayaa ku tartamaya suuqan. Intaa waxaa dheer, gaadiidleyda qiimaha jaban iyo kuwa kirada sida Condor waxay u adeegaan suuqyada Jarmalka ee Jarmalka garoomada kala duwan ee Jarmalka iyo dalalka deriska ah.
Madaarka muhiimka ah ee Jarmalka ayaa weli ah FRAPORT (Frankfurt), laakiin Munich oo ku taal Gobolka Koonfurta Yurub ee Bavaria waa xarunta labaad ee ugu muhiimsan ee Jarmalka ku xidha adduunka
Ku dhawaad ​​dhammaan garoomada diyaaradaha waaweyn waxay ku xiran yihiin nidaamka Tareenka ICE, taasoo u oggolaanaysa inay isku xirto magaalooyinka waaweyn iyo garoomada diyaaradaha Jarmalka saacado gudahood iyo xawaare ka badan 200 km/h.
“Maaddaama xayiraadaha safarka ay fududaanayaan adduunka oo dhan, waxaa naga go'an inaan dib u dhisno shabakadeena caalamiga ah oo aan sii wadno sidii side caalami ah oo adduunka ku xira Kanada. Iyada oo reer Yurub ay rabaan inay mar kale u safraan Kanada, waxaan diyaar u nahay inaan macaamiisha dib ula kulanno qoysaskooda iyo asxaabtooda, ”ayay tiri Jen-Christophe Hérault, Maareeyaha Iibka Gobolka Jarmalka, Switzerland, Austria & Bariga Yurub ee Air Canada.
Sida dhammaan shirkadaha duulimaadyada, maalmahan xiisaha Air Canada iyo Madaarka Munich wuxuu ku salaysan yahay xaaladda maanta.
Sidaa darteed, Air Canada waxay ku dartay war-saxaafadeedkeeda: “Xusuusnow in jadwalka ganacsi ee Air Canada laga yaabo in la hagaajiyo sida loogu baahdo iyada oo ku saleysan dariiqa COVID-19 iyo xayiraadaha dowladda. Rakaabka ayaa ka mas'uul ah inay hubiyaan inay kulmaan dhammaantood
shuruudaha gelitaanka dawladda, oo ay ku jirto haysashada dukumentiyada safarka ee saxda ah, fiisooyinka, wixii shahaadooyin caafimaad ee loo baahan yahay, iyo dhammaan shuruudaha kale ee u -qalmitaanka duullimaad kasta oo ay iibsadaan. Macluumaadka ugu dambeeyay, fadlan booqo Hubkeena Xogta ama shabakadda Timatiga ee IATA. Siyaasadda Socdaalka: Buugi si kalsooni leh.
Shuruudaha dawladda ayaa laga yaabaa inay isbeddelaan ogeysiis yar